Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | Daily News Brief on Rakhine State Affairs 14/03/2018
Daily News Brief on Rakhine State Affairs 14/03/2018
(နေပြည်တော်၊ ၁၄ -၃-၂၀၁၈ ရက်)
History will be final judge on Rakhine
U Htin Lynn said the terrorist attacks by the ARSA terrorist group in Rakhine State in August 2017 abruptly changed the state of affairs in northern Rakhine and made restoration of law and orderapriority, which has led to the displacement of people internally in Rakhine State and across the border. The Permanent Representative noted that many ethnic groups, including Rakhine, Daing-net, Mro, Thet, Mramagyi and those belonging to Buddhist, Muslim and Hindu faiths have remained in their villages, as witnessed by members of the diplomatic corps and UN entities in their recent visits.
“What the government does should not be viewed withapreconceived mind and doubtful eyes”, U Htin Lynn said. “Myanmar hopes the the international community will constructively contribute to our efforts to advance the democratisation process and promote and protect human rights in line with the country’s circumstances and needs”.
Dr. Thar Tun Kyaw, Director-General of the Public Health Department and Medical Treatment Department, and Dr. San San Aye, Director-General of Social Welfare Department conferred Ks 90,000 to each of the 122 pregnant mothers present.
—Kyaw Thu Win, The Global New Light of Myanmar
ရခိုင်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ သမိုင်းက ဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်
ဂျီနီဗာမြို့၊ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်/ သံအမတ်ကြီး ဦးထင်လင်း မှ ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ သမိုင်းက ဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၁၂-၃-၂၀၁၈ ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့သည်။
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်/ သံအမတ်ကြီးမှ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့် အရေး အခြေအနေဆိုင်ရာ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွင် လူ့အခွင့်အရေးကို အဓိက ဦးစားပေးတာဝန်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်အနေဖြင့် ဆိုးရွားလှသည့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု ရှိသည်ဆိုသည့် စွပ်စွဲချက်များအပေါ် ဥပက္ခာပြုထားသည်ဆိုသော ပြောဆိုချက်မှာ ယုတ္တိမတန်ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွင် ဦးစွာ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေဆိုင်ရာ အထူးအစီရင်ခံစာ တင်သွင်းသူ မစ္စယန်ဟီလီမှ ၎င်း၏ အစီရင်ခံစာတင်သွင်းပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်သည့် နိုင်ငံတကာအချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့မှ နှုတ်ဖြင့် အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။
မစ္စယန်ဟီလီမှ မူဆလင်လူမျိုးစုများအပေါ် လူမျိုးသုဉ်းသတ်ဖြတ်မှုလက္ခဏာတွေ့ရှိရ ကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လွတ်လပ်သည့် နိုင်ငံတကာအချက်အလက်ရှာဖွေရေးဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ Marzuki Darusman မှ အချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့၏ ရှာဖွေစုဆောင်းတွေ့ရှိချက်များအရ အမျိုးသမီးများအပါအဝင်၊ မူဆလင်လူနည်းစုအပေါ် ရက်စက်သည့် အကြမ်းဖက်မှုလုပ်ရပ်များ တွေ့ရှိရကြောင်းဖြင့် ပြောကြားခဲ့သည်။
သံအမတ်ကြီး ဦးထင်လင်းမှ ပြန်လည်ချေပပြောကြားရာတွင် သက်သေအထောက်အထား မရှိဘဲ စွပ်စွဲပြောဆိုမှုများအပေါ် ပယ်ချခဲ့ပြီး၊ မစ္စယန်ဟီလီ နေရာတွင် အစားထိုးရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါ သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ၁၉၉၂ ခုနှစ်များမှစ၍ အထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူများ၏ ခရီးစဉ် များကို လက်ခံပေးခဲ့ပြီး၊ မစ္စယန်ဟီလီ၏ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ခရီးစဉ်ကို ခြောက်ကြိမ်တိုင် စီစဉ်လက်ခံ ပေးခဲ့ပါသည်။
မြန်မာ့ခေါင်းဆောင်နှင့် အစိုးရအနေဖြင့် ယင်းသို့သော ပြစ်မှုများကို မည်သည့်အခါမှ ခွင့်လွှတ်သည်းခံမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ တိကျခိုင်မာသည့် အထောက်အထားရှိပါက မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် အရေးယူရန် အဆင်သင့်ရှိပါကြောင်း၊ အင်းဒင်ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း နှင့် စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည့် တပ်မတော်နှင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ရွာသားများကို ဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းနှင့် တာဝန်ခံမှုရှိခြင်းအတွက် အပြုသဘော ဆောင်သည့် ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ပင် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
သံအမတ်ကြီးမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ARSA ၏ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများသည် ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေအနေကို ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲစေခဲ့ကြောင်း၊ ရခိုင် ပြည်နယ်နှင့် နယ်စပ်တစ်လျောက်တွင် ထိခိုက်ခံရသူများအားလုံးအတွက် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုများဖြစ်သည့် ရခိုင်၊ ဒိုင်းနက်၊ မြို၊ သက်၊ မရမကြီးနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ မူစလင်၊ ဟိန္ဒူဘာသာကိုးကွယ်သူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ကျေးရွာတွင် အတော်များများ ဆက်လက်နေထိုင်လျက်ရှိနေသည်ဆိုသည့်အချက်ကို သံတမန် များနှင့် ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီများမှ ၎င်းတို့၏ မကြာသေးမီက ရခိုင်ပြည်နယ် ခရီးစဉ်များတွင် တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် နိုင်ငံတကာ၏ အမြင်နှင့် သဘောထားပုံစံ ပြောင်းလဲသွားခဲ့ကြောင်း၊ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် အစီရင်ခံစာများထဲ၌ တပ်မတော်မှ မူဆလင် ကျေးရွာများတွင် တပ်စခန်းများ တည်ဆောက်နေမှုများရှိကြောင်း စွပ်စွဲဖော်ပြခဲ့ကြောင်း၊ ပြန်လည် လက်ခံရေးအတွက် လိုအပ်သည့် ပြင်ဆင်မှုများအနက် မြေထိုးစက်ဖြင့် မြေညှိခြင်းမှာ ယင်း လုပ်ငန်းစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အစိုးရမှ ဆောင်ရွက်သည့် မည်သည့်ကိစ္စမျိုးမဆို အပြစ်သဘော သံသယအမြင်ဖြင့် မရှုမြင်သင့်ကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မြှင့်တင်ရန်နှင့် လူ့အခွင့်အရေး တိုးတက် မြှင့်တင်ကာကွယ်ရေးတို့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေအနေ၊ လိုအပ်ချက်တို့နှင့်အညီ ကြိုးပမ်းမှုများကို နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေဖြင့် အပြုသဘောပံ့ပိုးကူညီသွားလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်းတို့ ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
(The Global New Light of Myanmar)
မောင်တောဒေသ၌ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များနှင့် နှစ်နှစ်အောက်ကလေးငယ်များအား ထောက်ပံ့ငွေ ပေးအပ်
မောင်တော မတ် ၁၃
မောင်တောဒေသ လူထုအခြေပြု ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့် ငါးနှစ်အောက် ကလေးငယ်များ အတွက် အာဟာရဖွံ့ဖြိုးရေးလှုပ်ရှားမှုနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်များနှင့် နှစ်နှစ်အောက်ကလေး သူငယ်များအား ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း အခမ်းအနားကို မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် မောင်တောမြို့နယ် မောရဝတီကျေးရွာ၊ ရွှေဇားကျေးရွာနှင့် မောင်တောမြို့ အမှတ်(၂) ဟိန္ဒူ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတို့၌ ကျင်းပသည်။
အခမ်းအနားတွင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ် ဒေါက်တာသာထွန်းကျော်၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာစန်းစန်း အေးနှင့် တာဝန်ရှိသူများက ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအား ခြောက်လစာအတွက် တစ်ဦးလျှင် ထောက်ပံ့ကြေး ငွေကျပ် ၉ဝဝဝဝ နှုန်းဖြင့် ၁၂၂ ဦးအား ပေးအပ်ခဲ့သည်။
ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောနှင့် ရသေ့တောင်ဒေသများတွင် အာဟာရဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာသင်တန်းများနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့် နှစ်နှစ်အောက်ကလေးများအား ထောက်ပံ့ ကြေးငွေများ ပေးအပ်ခြင်းကို ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတို့က ပူးပေါင်းပြီး ထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် ကုသပေးနိုင်ရန်အတွက် အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း များကို စနစ်တကျသင်တန်းများပေးကာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ မောင်တောဒေသတွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် ၁၁၅၈ ဦးနှင့် နှစ်နှစ်အောက် ကလေးငယ် ၁ဝ၂၆ ဦးအား ထောက်ပံ့ကြေး ငွေများ ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။